'निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट मात्र समृद्धि संभव'–ढकाल
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबिना देशमा समृद्धिको यात्रा पूरा नहुने बताएका छन् । पोखराको लेखनाथमा आयोजित लेखनाथ महोत्सवलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले भने–‘नेपालका तीनओटै तहका सरकारहरुले निजी क्षेत्रसँगको सही अर्थमा र व्यावहारिक रुपमा साझेदारी...
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सनराइज बैंकको संयुक्त तत्वावधानमा आज महासंघ सचिवालयमा महिला उद्यमीहरूका लागि सहुलियत कर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्नुहुंदै महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता विकास विस्तार गर्न वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग...
नेपाल चीन तथा समग्र दक्षिण एशियाकै व्यावसायिक हब बन्न चाहन्छ : राणा
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले चीन तथा समग्र दक्षिण एशियाकै व्यवसायिक हवको रूपमा विकास हुने नेपालको चाहनालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् । शिल्करोड चेम्वर इन्टरनेशनल कमर्सको आयोजनामा चीनको सियानमा चलिरहेको शिल्क रोड व्यवसायिक सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राणाले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।...
महासंघ र एडीपीसीबीच प्राकृतिक विपत्तिमा सहकार्य गर्न समझदारी
काठमाण्डौ । दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियामा प्राकृतिक विपत्तिका बखत आइपर्ने समस्या एवं चुनौतीहरूबाट हुन सक्ने क्षति न्युनीकरणमा यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू बीच सहकार्य गरी यस क्षेत्रका जनताको सुरक्षित व्यवस्थापन र दिगो विकासमा कार्यरत एशियन डिजास्टर प्रिपेर्डनेस सेन्टर (एपीडीसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच हिजो मंगलबार म्यानमारमा...
नेपाल–चीन गैह्र सरकारी सहयोग मंचको तयारी बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न
काठमाण्डौ । नेपाल–चीन गैह्र सरकारी सहयोग मंचको तयारी बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । आगामी वर्षको सेप्टेम्वरमा चीनको सिचुवानमा आयोजना हुने नेपाल–चीन गैह्र सरकारी सहयोग मंचको तयारी बैठक आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालयमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपाल पक्षको नेतृत्व मंचका सह–अध्यक्ष एवं महासंघका पूर्व अध्यक्ष रविभक्त...
महासंघका अध्यक्ष राणा र संयुक्त अरव इमिरेट्सका राजदूत बीच भेटवार्ता
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र नेपालका लागि संयुक्त अरव इमिरेट्सका राजदूत सइद हमदान अल नाकवीबीच आज महासंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा महासंघका महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाको पनि सहभागिता थियो । उक्त भेटवार्तामा नेपाल र संयुक्त अरव इमिरेट्स बीच सहयोग एवं सहकार्य, नेपालमा संयुक्त अरव...
एफएनसीसीआईको भावी अध्यक्षमा शेखर गोल्छा निश्चित, कार्यकारिणी समितिद्वारा अनुमोदन
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसिसीआई)का भावी अध्यक्ष शेखर गोल्छा बन्ने औपचारिक रुपमै निश्चित भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बिहीबार बसेको १४ औं कार्यकारिणी समिति बैठकले महासंघको विधान २०४९ (छैठौ संशोधन सहित) संशोधनको लागि यही २०७६ साल कार्तिक २९ गते हुने भनिएको विशेष साधारण सभा रोक्का गर्ने सम्बन्धमा स्थायी...
व्यवसायिक विवादका लागि अब अदालत जानु नपर्ने, एफएनसीसीआईमै खुल्यो मेलमिलाप केन्द्र
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालयमा स्थापित व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्रको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । केन्द्र उद्घाटन पश्चात व्यवसायिक मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले मेलमिलाप केन्द्र...
काठमाण्डौ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधान बनाएर आफूहरुले उद्योग वाणिज्य महासंघमा ‘राजाको जेठा छोरा’लाई जन्म दिने काम गरेको महासंघकै पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बाहेकका मुख्य पदाधिकारीहरुले बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी तीन वर्षअघि विधान संसोधन गरी वरिष्ठ...
एफएनसीसीआईमा नयाँ ट्वीस्ट, शेखर गोल्छालाई एक्ल्याउँदै अन्य पदाधिकारी एक ठाउँमा
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा गठबन्धन निर्माणका खेलहरु भइरहन्छन् । पछिल्लो समय नेतृत्व चयनका लागि विगतमा भएको त्रुटिपूर्ण बिधानलाई संसोधन गर्ने विषयमा समेत गठबन्धनका नयाँ–नयाँ रुपहरु सतहमा आउँदै, हराउँदै गर्न थालेका छन् । एफएनसीसीआईमा एउटा समूह पैसाको बलजोडमा त्रुटिपूर्ण विधानलाई संसोधन नै हुन नदिने खेलमा छ भने...
एफएनसीसीआईमै फर्किए धरणीधर खतिवडा, दोश्रोपटक महानिर्देशकमा नियुक्त
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रिक्त महानिर्देशक पदमा धरणीधर खतिवडालाई नियुक्त गरिएको छ । नवनियुक्त महानिर्देशक खतिवडाले बुधबार नै पदबहाली गरेका महासंघ सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा नेतृत्वदायी पदमा रही काम गरिसकेका महानिर्देशक खतिवडा पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको...
कोलकातामा नेपालको आफ्नै सिएफएस, ५०० कन्टेनर राख्न सकिने
काठमाण्डौ । भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा हिजोदेखि आफ्नै कन्टेनर फ्रेट स्टेशन(सीएफएस) संचालनमा आएको छ । नवनिर्मित सीएफएस शुभारम्भ समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानको नेतृत्वमा नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रह्यो । सीएफएस, ट्रान्जिट बन्दरगाह नजिक मालबाहक कन्टेनर राख्न र वैधानिक औपचारिकता...
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्ने कार्यको शुरूवात गरेको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघबाट भदौ १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने पूर्व योजना अनुसार उक्त कार्यको शुरूवात गरिएको हो । अनलाइनबाट...
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वर्तमान कार्यकारिणी समितिमा रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा महासंघको वर्तमान कार्यकारिणी समितिका सदस्य निरक के.सी. निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष भवानी राणाको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न महासंघको कार्यकारिणी समितिको १३ औं बैठकबाट के.सी. कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । राणाले...
एफएनसिसीआईमा तीव्र ध्रुवीकरण, साख जोगाउने नेतृत्वको खोजी
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हिलो छ्यापाछ्यापको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। विधान संसोधनको विषयलाई लिएर महासंघभित्र नयाँ टकराव र हानाहानको क्रम सुरु भएको हो । महासंघमा हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधानलाई संसोधन गर्न खोजिएसँगै तीव्र ध्रूवीकरण सुरु भएको छ । विधान...
आफूले फट्याईं नगरेको दीपेन्द्र अग्रवालको प्रष्टीकरण, भने–‘समाचार डिलिट नभए ठीक हुन्न’